Cayaarta Dhex maraysa Xulalka Kubadda Cagta Soomaaliya iyo Itooobiya waxaad ka daawan kartaa Kanalka
Xulka Kubadda Cagta Soomaaliya oo ka qeybgalaya tartanka Qaramada Bariga iyo Bartamaha Afrika (Cacafa) oo ka soconaya Magaalada Adis ababa ee dalka Itoobiya ayaa galabta kulankoodii ugu horeeya la cayaari doonaan xulka Kubadda Cagta waddanka Rwanda oo kamid ah xulalka la aaminsan yahay inay ku guuleysan doonaan koobkan.
Xulalka Rwanda, Soomaaliya, Uganda iyo Suudaan ayaa waxay ku wada jiraan Guruubka C-iyadoo la sheegayo in Guruubkan uu yahay kii dhimashada marka la eego dalalka ku wada jira.
Cayaartan oo markii ugu horeysay oo uu Xulka Soomaaliya hoggaamin doono tababara u dhashay dalka Kenya oo lagu magacabo DANIEL MUINDUKO ayaa bilaaban doontaa 4:00 Galabnimo xilliga Magaalada Muqdisho, waxaana si toos ah (Live) ah looga daawan karaa Kanaalka waddanka Itoobiya Tv (ETV) oo laga helayo ama ciddii haysata ka heli karto Receiver-ka Digtalka qeybta Arabsat-ka.
Magaalada Adis ababa waxaa ku nool boqolaal Soomaaliyed kuwaas oo la filayo in qaarkood Garoonka buuxiyaan sida ay sheegayan wararka naga soo gaaraya Magaalada Adis ababa ee xarunta Itoobita.
Guddoomiyaha Xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliya Muxyadiin Xasan Cali (Darbo weyne) ayaa isna ku sugan Magaalada Adis ababa ee dalka Itoobiya, isagoo dhiirigelin u sameeyay xulka Kubadda Cagta Soomaaliya.